Ronaldo iyo Buffon oo rikoor qaas ah ka sameeyay Shaxda Kooxda Aduunka Ugu Fiican Ee FIFPro World XI – Gool FM
Dajiye September 10, 2018
(Yurub) 10 Sept 2018. FIFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday liiska 55 ciyaaryahan ka kooban ee u sharaxan in ay qeyb ka noqdaan kooxda ugu fiican aduunka 2018, taasoo lagu dhawaaqi doono xaflada lagu qaban doono magaalada London bishan dhamaadkeeda.
Liiska FIFA waxaa ku jira dhamaan ciyaartoyda waaweyn iyo ciyaaryahano kale ee tayo leh.
Liiska FIFA ay ku dhawaaqday ayaa waxaa kasoo muuqda Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale goolhaayaha reer Talyaani ee Gianluigi Buffon, kuwaasoo rikoor cajiib ee gaar ah ka heysta liiska musharaxiinta kooxda aduunka ugu fiican ee sanadka 2018.
Cristiano Ronaldo iyo Gianluigi Buffon ayaa ku soo jira liiska musharaxiintan tan iyo xilli ciyaareedkii 2004/05, mana aysan ka bixin hal jeer ilaa iyo xili ciyareedkan.
Xiriirka kubada cagta aduunka ee FIFA ayaa hablayo gaar ah ugu diray bartooda rasmiga ah ee Twitter-ka xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Gianluigi Buffon kadib guushan ay gaareen.
Qaraxii Maanta oo Sababay in la baajiyo kulankii berito dhex mari lahaa Degmooyinka Hodan iyo Xamar Wayne...(Goorma ayaa dib loo ciyaarayaa?)